အင်တာနက်ပေါ်မှ မြန်မာစာအုပ်များ | Save Burma
[…] Save Burma […]
Web Site Link _ TND « Thet Nandar’s Family
http://www.myanmarisp.com/documents/aungsan/2009-2/eBooks/Aung-San-by-Aung-Than/view မှာ ရှိပါတယ်။ မြန်မာ့ သတင်းဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာအဖွဲ့ ဘလော့ဂ်က တင်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရှာကြည့်တယ်။ မတွေ့သေးပါ။ Google search, etc. မှာ ဇော်ဂျီဖောင့်နဲ့ ရိုက်ပြီး ထပ်ရှာကြည့်ပါဦး၊ တွေ့ရင် လင့်ခ်ပို့ပေးပါ။
စီးပွားဖြစ် ဥယဉ်ခြံစိုက်ပျိုးရေးစာအုပ် နှင့် ဥစားကြက်မွေးမြူရေး စာအုပ် ကျေးဇူးပြု၍ ၈ှာပေးပါ ခင်ဗျာ
ကျေးဇူးအထူးတင်ပါသည်. ဒီဆိုဒ်ကို ကျွန်တော်က အခုမှသိရတာပါ။
ကျွန်တော့်လို စာဂျပိုးအတွက်တော့ အရမ်းကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ ဆိုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
ရှမ်းလူမျိုးများ၏ယဉ်ကျေးမှုများနှင့်ရိုးရာဓလေ့ (ဒေါက်တာအေးကျော်)၁၉၆၈ ထုတ်
sai line han
အရန်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် မထင်မှတ်ဘဲနဲ့ ဒီဆိုဒ်လေး ကို ရှာတွေ့ပေမဲ့ စာအုပ်ကောင်းကောင်းတွေ အများကြီးကို တင်ပေးထားတဲ့အတွက် အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Win Htut (MDY)
Thanks for your visit. Knowledge is power.
Thanks for your visit. I tried but still in failure. Hoping to get it in the future,..
မြန်မာစွယ်စုံကျမ်းအတွဲ-၂ လှူချင်ပါတယ်။ဘယ်ကိုပေးပို့ ရမလဲခင်ဗျာ။
http://www.myanmarbookshop.com for hard copies of various Myanmar Books.
ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ ကျနော့်ဆီကို အနည်းဆုံး link ပို့ထားရင် ကျန်တာကို ကျနော် ဆက်လုပ်လိုက်ပါ့မယ်။ File နဲ့ပို့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ ဝယ်နိုင်သူတွေအတွက် အကျိုးရှိမယ့် website ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို မြန်မာစာအုပ်တွေ တော်တော်များများ တင်ပေးထားတဲ့အတွက် ကျေူဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တစ်ခုတောင်းဆိုချင်တာက မြန်မာသဒ္ဒါ စာအုပ်လေး တစ်အုပ်လောက်ပါ။ တကယ်လိုအပ်နေလို့ပါ။
အခြားစာဖတ်သူတွေလည်း တွေ့မိရင် သတင်းပေးကြပါ။
Myanmar Book Shop မှာ ရောင်းနေတာတော့ တွေ့တယ်။
ွှThank you very much foralot of books
အကို ကျွန်တော် download လုပ်လို.မရဘူး ကူညီပါအုံး
ဆရာလင်းယုန်မောင်မောင် စာအုပ် များရှိရင် တင်ပေးပါအုံးနော်။
ဆရာလင်းယုန်မောင်မောင် စာအုပ်တွေ ကိုလဲဖတ်ချင်လို့ပါ။
တင်သီရီ (ညောင်ဦး) ရေးတဲ့ *မောင်အရှေ့ကိုလျှောက်ရင်* ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးရှာပေးပါ
အခုလို စာအုပ်တွေ အများကြီးကို တင်းပေးထားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စာဖတ်ဝါသနာပါတဲ့ မြန်မာတွေအတွက် အလွယ်တကူ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး ဖတ်နိုင်အောင် လုပ်ပေးတဲ့ အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျေးဇူအရမ်းတင်တယ်ဗျာ အခုလိုစာအုပ်တွေကို တစ်စုတစ်ဝေး တင်ပေးတဲ.အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ
စာအုပ်ဖတ်ချင်ရင် တခူးတက ရှာစရာမလိုတော.ဘူးလေ
ဒေါက်တာရဲနိုင်ရဲ့ အနောက်ကိုရွှေ့ အရှေ့ကိုမျှော် ၀တ္ထုကို ဖတ်ချင်ပါတယ်။
အရမ်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ website ပါ။ စာအုပ်ကောင်းတွေ အများကြီးဖတ်လိုက်ရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ရွှေဥဒေါင်းရဲ့ စာအုပ်လေးတွေထပ်ပီးဖတ်ချင်ပါသေးတယ် ခင်ဗျာ။ :)
Is there any English to Burmese Law Dictionary?
ဆရာ စံဖာနည်ဘို နဲ့ ဆရာဟိန်းလတ်တို့ ရဲ့ တာ့ရော့အကြောင်းရေးထားတဲ့စာအုပ်လေးတွေ
နိုင်ဝင်းဆွေ ၇ဲ့ နွေတည နဲ့ေ၇ဆန်လမ်း ၇ှိ၇င်ဝေမျှပေးစေလိုပါတယ်
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်ရေးတဲ့ ပန်ဒ်ုရာအိုးပွင့်၍ဟားပီးဇ်တို့ပြန်လာချိန် စာအုပ်တွေကို လိုချင်လို့ပါ။
pdf or online reading link သိရင် obhikkhu@gmail.com ကို ပို့ပေးပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
Please uploadabook if possible ( ဖိုးကျော့ ၊ အင်တွဲပွဲညှက်အရှာထွက် ) စာပေဘိမာန် ဆုရစာအုပ်ဖြစ်ပါသည်..
သိုးဆောင်း စာအုပ်များကိုလဲ တင်ပေးစေချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ…